Vaovao - Ny andraikitry ny fonosana vy
1. Ny fonosana metaly dia eken'ny mpanjifa noho ny fahaizany sy ny fahaizany miovaova. Ny fonosana metaly dia azo jerena na aiza na aiza amin'ny fiainana maoderina. Ny fivoarany maharitra sy ireo fiasa miavaka voatanisa etsy ambany dia mahatonga azy io ho vahaolana fonosana tsara indrindra ho an'ny taonjato faha-21:
Tombony amin'ny fonosana vy:
* Arovy mandritra ny fotoana maharitra ny vokatra; amin'ny fanjakana mihidy, ny sakafo dia azo tehirizina tanteraka hatramin'ny fotoana nanidiana azy.
* Sakano ny fako vokatra
* Tazomy ny otrikaina fonosana; manitatra ny androm-piainan'ny vokatra fonosana
* Ataovy azo antoka ny fiarovana anao amin'ny hazavana, oxygen ary bakteria
* Mijanona ho vaovao hatrany ny vokatra mandra-pisokafan'ny vata famarana; ny fonosana vy misy androm-piainany dia afaka misoroka hazavana, oxygen ary bakteria; ny lata dia afaka miantoka fa ny vokatra dia mijanona ho vaovao.
* Ny metaly dia mitohy manan-kery lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana. Ny isan-karazany amin'ny fampiharana dia tsy misy fetrany, manomboka amin'ny fonosana ho an'ny vatomamy manondraka vava, horonan-tsary mikitroka hatramin'ny aerosol ary maro hafa. Ny fonosana vy dia manatsara sy mivoatra tsy tapaka mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa.
Androany, ny vy dia nampiasaina tamin'ny karazana vokatra sy vahaolana amin'ny fonosana, fa ny mpamorona kosa dia manohy mitady fotoana vaovao hisarihana ny mpanjifa. Ny boaty vy dia misy endrika, habe ary haingo isan-karazany, izay azo ampiasaina amin'ny:
Sakafo, zava-pisotro, entana lafo vidy, vokatra manokana, kojakoja ilaina amin'ny isan-tokantrano.
Ny fanararaotana no tena antony manosika ny fampandrosoana ny fonosana entana fonosana ho an'ny mpanjifa. Ny fiovan'ny rafitry ny mpianakavy, ny ora fiasana miovaova ary ny fotoana fivezivezena dia nahatonga ny fiovan'ny fahazarana mihinana. Ny fianakaviana famonosana dia mihakely ary mihakely kokoa, miha be ny fomba fiainana, ary ny indostrian'ny fonosana dia mivoatra tsy tapaka hamaly ireo filàna miovaova ireo.
Ny fonosana vy dia manana hamafin'ny hafanana, izay manatsara ny fiarovana ny vokatra. Ny fananana sakana dia afaka mitazona kalitao tsara sy ny fidiran'ny loto, amin'izay dia azo antoka fa tonga soa aman-tsara amin'ny mpanjifa ny atiny nefa tsy voaloto.
Ny fonosana metaly dia mamaly ny filan'ny mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny fonosana mora misokatra sy azo ahodina ary ireo ampahany azo tantanana izay mamela ny mpanjifa hanokatra izay ilainy fotsiny. Ny famolavolana vy vita amin'ny vy izay azo ampiasaina amin'ny lafaoro mikraoba dia manitatra ny fahamoran'ny fonosana vy ho an'ny sakafo maivana.
Ny sakafo am-bifotsy dia azo hanina soa aman-tsara mandritra ny taona maro ary mety ho an'ny sakafo anio na ho an'ny maika tampoka. Ny tanky dia tsy mila vata fampangatsiahana na hampangatsiaka. Izy ireo dia manome fiarovana feno amin'ny hazavana sy ny oxygen, ary voaisy tombo-kase. Izy ireo koa dia afaka miaro ny sakafo hanakanana ny otrikaina tsy hiditra ao anatiny. Ny vokatra dia voaaro amin'ny hamandoana, vovoka, mpikiky ary loto hafa.
3. Mahafinaritra kokoa ny fonosana
Ny teknolojia fanaovana sary an-tsaina sy fanaovana sary an-tsaina dia ahafahan'ny mpanamboatra mamorona endrika canany manavao. Ny embossing dia teknika iray izay mamokatra haingon-trano na fanamaivanana miaraka amin'ny fivoahana avo (avy ao anatiny ka hatrany ivelany), fa ny de-protrusions kosa dia mamorona haingo miaraka amin'ny contour concave (avy ao anatiny ka hatrany ivelany). Ny tombony amin'ny faritra convex sy concave dia ny fitandremana ny refy ivelany misy, noho izany tsy ilaina ny manova ny toerana fitaterana sy ny pallet. Ny metaly teo aloha dia voasoratra anarana miaraka amin'ny sary pirinty mba hampitomboana ny vokatra hita maso sy ny fiasa. Ny sary sy ny sary, ny marika LOGO, ny fampitandremana amin'ny paika sy ny fiasan'ny marika dia azo hatsaraina avokoa.
Amin'izao fotoana izao, ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia miorim-paka ao am-pon'ny olona, ​​ary ny fonosana vy azo averina simba dia tian'ny mpanjifa; fonosana vy dia azo averina 100% mandritra ny fotoana tsy voafetra nefa tsy very ny toetra mampiavaka azy. Izy io dia loharanom-pahalalana azo ampiasaina maharitra, namboarina be erak'izao tontolo izao, ary iray amin'ireo fitaovana fonosana misy taha ambony indrindra. Ny vy sy ny aliminioma dia anisan'ny loharanon-karena be indrindra eto an-tany, na dia mampihena be ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana aza ny fitaovana fanodinana.
Anisan'ireo fitaovana fonosana lehibe rehetra mifaninana, ny metaly dia manana ny taha ambony indrindra sy ny tahan'ny fanarenana, ary nitombo isan-taona izy io: - Tamin'ny taona 2019, ny tahan'ny fanarenana ny kapoaka vy sy ny kapoaka zava-pisotro vita amin'ny alimina dia 80% sy 75%; ny famerenana amin'ny laoniny ny fihenan'ny angovo ary entona karbônika karbonika betsaka no avoaka.
Boaty haingon-trano latabatra kafe, Boaty tin manokana, Vata famonosana antsinjarany, Face Coin Bank, Box an'ny mpifankatia ho an'ny sipa, Tea Tin Box,